Ixesha kunye nabahlobo 44
Kuyenzeka ukuba umntu onamandla eyengqondo kunye nombutho we-psychic anikeze ubukho bomzimba ngokwenkqubo yomlingo kulo naluphi na uhlobo uhlobo athanda ngalo; kwaye okwangoku, kunokuba yinto elula ekugqibeleni ukuba ayifumane loo nto njengabanye abantu bafumana izinto zomnqweno wabo. Ngezandla njenge matrix nayiphi na idiphozithi yezimbiwa okanye yefomometri inokuchazwa kwinto engeyiyo. Ngokunjalo nawo umbandela ophambili ungabanjelwa zizandla ezidityanisiweyo kwaye zadityaniswa zaza zadityaniswa.
Amandla okomoya nawengqondo afunekayo kulowo uya kunika isimo somzimba kwizinto ezingabonakaliyo yile: ukholo, ukuthanda, kunye nengcinga. Ukongeza, umzimba wakhe we-astral kufuneka ukwazi ukugcina kunye nokuvelisa amandla kazibuthe amaninzi. Wonke umntu unokholo, ukuthanda, kunye nombono; kodwa, kumlingo, ezi kufuneka ziphakanyiselwe kumandla aphezulu. Akukho msebenzi wenziwayo ngaphandle kokholo. Ngomsebenzi osezandleni zethu, umlingo wethu kufuneka abe nokholo, kwaye olo lwazi lusebenza. Oku kukholwa kusenokungabi yimisebenzi yemisebenzi kunye neenzame zakhe kobu bomi bangoku. Umlingo wethu kufuneka abe nokholo kwisakhono sakhe sokuzisa ukubonakala okungabonakaliyo, ukwenza ukuba ivakale ingaqondakali, ukwenza oko kungabonakaliyo, ukuvelisa kwiimvakalelo ezingakwaziyo ukuyiqonda. Ukuba akanalo ukholo lokuba zinokwenzeka ezi zinto, ukuba akanalukholo angazenza, ngekhe enze. Ukuba uyakholelwa ekubeni angayenza imisebenzi yomlingo kuba umntu othile umxelela ukuba anganako, ukukholwa kwakhe asilukholo. Ihlala ikholelwa, umbono. Ukuze uphumelele emsebenzini wakhe ukholo lwakhe kufuneka luphakame ngaphakathi kuye, kwaye lungagungqiswa yiyo nayiphi na into ethethwayo. Ukholo oluphilayo luvela kulwazi olityelweyo, olwafunyanwa kwakudala. Makangahlali anelisekile lukholo olungagungqiyo, kodwa kufuneka azise okwangaphambili kulwazi lwangoku. Kuya kufuneka asebenzise ingqondo yakhe. Ukuba ukulungele ukusebenzisa ingqondo yakhe ngeengcinga, ukholo lwakhe luya kumkhokela kwimisebenzi yakhe yengqondo kwaye luya kubonelela ngendlela yexesha elidlulileyo ukuba lube nakho ulwazi olukhoyo.
Ngokuphathelele ekucingeleni, umlingo wethu kufuneka wahluke kwabo babizwa ngokuba ngabantu bengcinga, kuba baneenqwelomoya. Ukuqiqa kukwenza imifanekiso, okanye ilizwe ekwenziwa kuyo imifanekiso. Imifanekiso eyenziwe ngumlingo yimifanekiso yengqondo kwaye ethi, xa yenziwe, ayaphulwa lula njengaleyo yodongwe okanye enye into yomzimba. Imifanekiso yemilingo yethu kunzima ukuyenza kwaye yaphula kwaye iya kuhlala ixesha elide kunaleyo ifakwe imabula okanye isinyithi. Ukuze ube nengcinga eyimfuneko ekusebenzeni kwakhe, umlingo wethu kufuneka alungelelanise ingqondo yakhe kuloo nto aya kuyinika isimo somzimba. Kuya kufuneka enze umfanekiso wayo. Oku akwenza ngokugcina ingqondo yakhe ikwisimo de ibe kuye umfanekiso, anokuphinda abize kwakhona ngengcinga. Xa enokholo kwaye esenza imifanekiso ngokuzithandela, uya kwenza njalo. Oko kukuthi, uyakwazi ukubiza umnqweno wokunceda emsebenzini wakhe. Umyolelo uhlala kuyo yonke indawo nanjengembane ihlala ikulungele ukubolekisa amandla ayo kuye nakubani na obonelela intsimi ngomsebenzi wayo, onokuyenza ukuba iqhakamshele intsimi.
Zonke iintshukumo zokubhukuda zinokuchazwa ngokuchaneka kwemathematics; Ukanti, ukuba umntu emanzini uzama ukulandela izikhombisi-ndlela kodwa engakholelwa kumandla ayo okuqubha kwaye angazicingeli xa ebhukuda ngelixa esenza iintshukumo, uya kuthi angabhukudi. Ukuthandabuza kwaye woyike ukumbamba, aze atshone. Xa uzama ukuhamba ngentambo eqinileyo, umntu ongenalo ukholo lokuba angakwazi ukuyihamba kwaye angazicingeli ngentambo kwaye ehamba ngentambo efuna ukuwa, aze ayenze. Ukudibana kunye nemithetho yokuxhuzula kunye ne-fiziks akuyi kumgcina kule ntambo. Ukholo lumbonisa ukuba wenza njani. Ukuqiqa kumgcina entanjeni. Ngaba uya kumnika amandla okuhamba. Ngalo lonke ixesha azicingela ngentambo kwaye nokuzithemba kwakhe kuyaqhubeka, akakwazi kuwa. Kodwa ukuba ingcinga yakhe itshintshile, kwaye ukuba unokuthi kancinci kwisiqingatha sesibini azicingele ukuba uyawa, umfanekiso awenzayo wokuwa kwakhe awuyi kumlinganisa kwaye umthoba.
Uqulathe ukholo, ukuthanda, kunye nengcinga, umntu unokuvelisa ngezandla zakhe izinto zomzimba ngenkqubo yemilingo. Ukwenza umzekelo: Ukubonaka ukubonakala komzimba ukuze ubume, ifom kufuneka ibanjwe okanye ucinge. Izinto ezingamanzi ezijikelezayo, ezingabonakaliyo, kufuneka zibanjelwe kwaye ziqine kwaye ziqine. Lo ngumsebenzi wokucinga. Ukudlula ngoku kunokwenziwa ngezandla zijikeleze malunga nefom oyifunayo. Ngokuhamba kwezandla ezijikeleze le fom, izinto ezisisiseko ziyatsalwa kwaye zilungiswe zifunyanwe kule fomu kwaye, ngokuthe ngcembe, ngokufumana okuqhubekayo, ifom iyabonakala kwaye yomzimba. Oku kwenziwa ngamandla okholo, enza ukuba imithetho elawula umba wokuqala waziwe nokuba wawudwebela njani kuwo wonke umsebenzi ufezekisiwe. Ingcinga sisikhokelo esibangela ukuba intando yenzeke okanye idibanise umba kunye nokuyizisa ifomathi. Ukuba ingcinga iyala ukusebenza, umsebenzi uyema. Ukuba ingcinga izinzile, umsebenzi wokucinga kunye nokholo uya kugqitywa ngumyolelo. Ifom yenziwa ngokomzimba, kwaye yeyobukhulu kunye nombala oyifunayo. Into encinci, njengelitye okanye ikristale okanye igelm, inokubekwa ngokubeka isandla sasekunene ngaphezulu ngasekhohlo, embindini wentende ejongene nomnye. Ke ilitye okanye igels okanye i-crystal kufuneka icingelwe kwaye loo mfanekiso kufuneka ubanjelwe kwingcinga kunye nokubonakala kwawo kwangaphambili. Imagnetism yezandla zomqhubi ngumhlaba apho umfanekiso wekristale okanye igugu, njenge germ okanye imbewu, uqala ukukhula. Ngamandla ombane phakathi kwezandla, iirawari okanye imitha yokukhanya yenziwa ukuba ingene kwi-matrix engqondweni, ide iveliswe ngobungakanani obufunekayo kunye nombala kunye ne-luster. Iifom zenziwe kwaye zinokuveliswa ziinkqubo zemilingo, kodwa kulula ukufumana iifom ezinqwenelekayo ngeendlela eziqhelekileyo kunokuqhubeka noqeqesho oluyimfuneko ukuze uzivelise ngeendlela zobugqi. Kodwa kulungile ukuba umntu abe nokholo, ahlakulele umbono wakhe, afunde ukusebenzisa intando. Ukuphuhliswa okanye ukufunyanwa kwala magunya mathathu omlingo kuya kwenza indoda yakhe. Emva koko unokukwazi, kodwa akunakwenzeka ukuba uya kuba, umenzi wamatye anqabileyo okanye ezinye iintlobo ngeenkqubo zemilingo.
Imikhombandlela ayinakunikwa eya kulungela zonke iintlobo zezifo, kodwa unokunikwa izikhombisi zoncedo kunyango lomgaqo-siseko kunye nokugula kwendawo leyo, kwaye okunokuthi kusebenza ngokubanzi kwabanye abaninzi. Kubalungele kakhulu ukuba abo baphilisayo baqonde iziseko ezimbalwa zomzimba kunye nemagneti yayo, ngaphambi kokuba bazame unyango lwemagnethi, yemizimba yabo okanye eyeyabanye.
Umzimba wenyama yingxaki yomcimbi ohlelwe ngokuhambelana nemithetho ethile, ilungu ngalinye lenze imisebenzi ethile kwaye likhonze iinjongo ezithile, kwintlalo-ntle eqhelekileyo. Ubunzima bomzimba bubanjwa kunye, bulungiswe kwaye bugcinwe, ngumzimba omazibuthe ofanekileyo ngaphakathi kobunzima. Imisebenzi yendalo yomzimba, efana nokuntywila, ukugaya, ukunyusa, ukungcola, kunye nazo zonke iintshukumo zokuzithandela, ziqhutywa ngumzimba omazibuko wefom ngaphakathi kubunzima bomzimba. Imithetho ethile ilawula yonke imisebenzi yomzimba. Ukuba le mithetho iyaphulwa, ngokuqinisekileyo izifo ezikhoyo ziya kulandela. Ezi ngxaki zibubungqina bokuba kukho into ephosakeleyo yenzekileyo, kwaye kukho uthintelo okanye kukho izinto ezininzi ezithintelo emzimbeni ezithintela amandla omzimba ukuba azise ubudlelwane obuhambelana namalungu alo okanye imisebenzi, okanye ukuba kukho inkcitho enkulu Amandla kunezixhobo ezinokubonelela. Umzimba wefomu yomazibhetri ibhetri yokugcina apho ubomi bendalo buhlala busebenza. Imagnethi yigreyidi edibanisa ubomi behlabathi kunye nezinto ezibonakalayo. Ngaphandle komzimba omazibuthe, ubunzima bomzimba bumele bube luthuli.
Kwimpiliso yokugula kusetyenziswa izandla, isandla sasekunene sibekwa ebunzi kwaye isandla sasekhohlo ngasemva kwentloko. Emva kokuhlala apho kuthe cwaka imizuzu embalwa, isandla sasekunene kufuneka sibekwe esifubeni kunye nesandla sasekhohlo malunga nomqolo. Kwimizuzu embalwa isandla sasekhohlo kufuneka sibekwe kwisincinci esincinci ngasemva kunye nasentendeni yesandla sasekunene kwinkaba. Ngomzuzu okanye emibini isandla sasekunene masishukunyiswe kancinci kwaye ngobunono bujikeleze yonke indawo yesisu-kwicala apho iwotshi yenzakeleyo-amaxesha amashumi amane anesithoba ize ke iziswe kwindawo yayo yokuqala kwaye ivunyelwe ukuba ihlale malunga nezintathu. imizuzu. Isandla sasekhohlo kufuneka sigcinwe simile, kunye nesandla phantsi komqolo, ngexesha lokuhamba kwesandla sasekunene. Umzimba kufuneka ubekwe endaweni yokuhlala phantsi.
Ngokuphathelele kulo naluphi na unyango lwasekhaya, isandla sasekhohlo kufuneka sibekwe ngaphantsi kwenxalenye echaphazelekayo kunye nesandla sasekunene kwelinye icala ngaphaya kwenxalenye yoko kwaye sivumeleke ukuba sihlale malunga nemizuzu emihlanu okanye kude kufike ixesha apho umntu esivakalelwa ngokwemvelo ukuba lixesha lokuyeka . Unyango lwasekhaya kufuneka lwandulelwe okanye lulandelwe unyango ngokubanzi oluchazwe kuqala. Amalungu omzimba anokuhlanjululwa, kodwa ukuxubha kufuneka kuthambe. Unyango lwe-harsh luhlala lwenzakaliswa ngokwezi ndlela.
Izandla zoqobo azivelisi unyango; Indlela yemagnethi esezandleni ayivelisi unyango. Unyango luveliswa bubomi bendalo iphela, obuqhutywa kukwimo yemagnethi emzimbeni womzimba ngezandla. Into yokubeka izandla emzimbeni kukuqhuba ubomi bendalo yonke ukuya kwifom yezibuthe kunye nokuqinisa ifom ye-magnethi ukuze ifumane kwaye igcinwe kwaye inxibelelane ngqo nobomi behlabathi. Ekunyangeni omnye umntu okanye umzimba womnye, kufuneka iqondwe kakuhle into yokuba ingqondo ayisichaphazeli unyango, kwaye nokuba ingqondo ayizami ukuqondisa okwangoku okanye iphazamise ukuhamba kwayo nangayiphi na indlela. Ukuba umntu akanakugcina ingqondo yakhe izolile kwaye ibuyele kwimeko yayo, ukuze ingaphazamisi kunyango, kungcono kakhulu ukuba ungazilandeli iinkqubo ezi ziphakanyisiweyo. Imizamo yengqondo yokwalathisa okwangoku inyango iyonakalisa kwinxalenye enkulu yomzimba ukwanelisa icandelo elincinci. Kodwa enyanisweni onke amalungu onakaliswe kukutsalwa. Oku akusiyo ingqondo okanye ukuphiliswa kwengqondo. Olu nyango lwamandla kazibuthe njengoko luchaziwe luya kuvuselela amandla omzimba omzimba ukuba ahlaziye isenzo kwaye ubomi bendalo buzowubuyisa. Ukwenzela ukuba kunyangwe kwaye kugcinwe umzimba usempilweni, umzimba kufuneka unikwe ukutya okufumanise ukuba kufuneka kulungiswe kwaye kugcinwe ubume bawo, kwaye yonke inkunkuma okanye iminatha emzimbeni kufuneka imisiwe.